Wasakheeyey Glass Shirt
Waxaa lagu daabacay White a, 100% caag dheeh sub t-shirt
Tagless la tag size screen caadadii daabacay
Custom 116 calaamad-xidhkii tolaa on daraftiisa hoose. Underside ee calaamadda akhriya, “Aan ka xishoonayaa”.
Kaca – Book
Kaca – album
album An idin bari karaan wax badan oo. Siyaabo badan, waa madal kama dambaysta ah si ay u faafiyaan fariin tiiraanyo leh, tiirsanaayeen casharo qiimo, iyo nolosha dabaal ee fudud a, qaab awood. Taasi waa si hufan waxa Trip Lee falaa uu afaraad album dhererka buuxa, “Kac.”
Si uu u gudbiyo farriin uu, Trip qaaday hab ka duwan in lagu qoro waqtigan agagaarka. Halkii la shaqeeyaan saarayaasha badan, ayuu keliya la soo saare muddo dheer Gawvi shaqeeyay album oo dhan ee uu studio Atlanta.
Waxaa lagu daabacay on Black a, 100% suuf T-shirt giraan-miiqeen.
Waxaa lagu daabacay la Daac-gacanta jilicsan, si print ay jilicsan tahay in la taabto.
Shirts waa tagless la tag a size screen caadadii daabacay.
Custom 116 calaamad-xidhkii tolaa on daraftiisa hoose.
Underside ee calaamadda akhriya, Anigu ma ihi ceeboobeen '.
shirts waxay leeyihiin cut a slimmer. Haddii aad jeceshahay ma xabbadood slimmer habboon, ka dibna waxaa la soo jeediyay inay dalban size a kor.
Life The Good – Book
baabuur gooyeen, guriga ka weyn, wax kasta oo ay doonayaan, wadnaha oo aad. Qof walba ayaa raba in ay ku noolaadaan Life The Good. Laakiin waxa dhaca marka riyooyin noqday qarow iyo yabooha xoriyad loo kaxeeyaa xagga nolosha ah oo xabsi? Maxaa dhacaya marka aad aragto in taasi dahab oo dhan u lumiya quruxdeeda? Waxaa laga yaabaa in hodanka iyo caanka ah aan ku nool Life The Good. Waxaa laga yaabaa in riyooyinkayagii waxaa salka ku been. Oo waxaa laga yaabaa in, kaliya waxaa laga yaabaa in kuwa ka yar run ahaantii leeyihiin more. Waa maxay Life The Good…run ahaantii?
In kitaabkan, oo cinwaan looga dhigay ka dib markii uu album afaraad amaano, Life The Good, artist raabka Christian iyo qoraaga, Trip Lee, oo ku soo bandhigaya waxa dunida, Oo hilibkii iyo Ibliiska kor u sida nolosha kama dambaysta ah iyo ugu qanco. Wuxuu markaas sharxayaa waxa Life Good ayaa run ahaantii waa: nolol ka dhex dhacay gaari karin oo weli ka baxsan wax adduun in uu dalab. Bal qiyaas: Life The Good. – trailer #1 – trailer #2
Life The Good – album